China SDK Kurapa Kununura Ziso Kuneta Kupisa Compress Kugadzira uye Fekitori | SDK
Kuedza kwakasiyana siyana kwakasimbisa kuti kana ukaramba uchitamba nharembozha yako kweawa imwe, iro dhigirii rinodzika zvishoma. Kana mbozhanhare ikaridzwa kazhinji, mwenje unopenya uye mumvuri parunhare zvinokonzeresa kutsamwa kumeso edu uye kukonzera kuneta kwemaziso. Vazhinji vanhu vari kubhadhara zvakanyanya uye zvakanyanya kutarisisa kune ekuchengetedza kwemaziso avo. Marapirwo akasiyana siyana epanyama akadzidza zvishoma kana zvishoma, kunyanya iyo inopisa compress, inova inozivikanwa zvikuru uye inoshandiswa.
Hot compress inogona kuita capillaries yemuno kuwedzeredza, kumhanyisa kufamba kweropa, kumhanyisa metabolism, uye kudzora kuzvimba, kuzvimba uye kuneta. Chinyakare mushonga wechiChinese unotenda kuti inopisa compress ine mhedzisiro yekuchera meridians, kusimudzira qi neropa, kubvisa ropa stasis, kudzikamisa kuzvimba uye kubvisa marwadzo; mushonga wemazuvano wekumadokero unotenda kuti chikuru chinangwa chekupisa compress ndechekuwedzera mitsipa yeropa, kukurudzira kuputira, kubvisa marwadzo, kukurudzira kutenderera kweropa munharaunda mumatsime, uye kukurudzira stasis yekumwa kweropa inopera, kuwedzera kudya kwemunharaunda.
Iyo inopisa compress inogona kushanda pamba kana kana uchifamba, saka iwe ungashuda kuzviedza. Kugara uchishandisa kupisa kumeso kunogona kubvisa kuneta kwemaziso, kubvisa madenderedzwa erima uye mabhegi pasi pemeso. Hutano hwemaziso hune hukama nehupenyu hwezuva nezuva, saka ndokumbira usaregeredze matambudziko eziso.
1. Inogona kusimudzira kutenderera kweropa mumaziso: Nekuisa kupisa kumeso, haigone chete kusimudzira kutenderera kweropa mumaziso, asi zvakare kuwedzera macapillaries mumaziso, kuitira kugadzirisa kuneta kwemaziso, kubvisa denderedzwa rerima uye gunguwo tsoka, uye zorora nyama dzemaziso.
2. Inogona kubvisa kuzvimba kwemaziso: inopisa compress inogona kukurudzira kutenderera kweropa uye kuderedza kuzvimba. Kana iwe ukaona kuti pane pachena kuzvimba kwemvura uye kurwadziwa mumaziso paunomuka mangwanani, kana mabhegi eziso ari pachena, maziso akazara uye akatsvuka, unogona kuisa kupisa kumeso ako, izvo zvinogona kunyatso kugadzirisa izvi zviitiko uye kubvisa kusagadzikana kweziso.
3. Inogona kudzikisira maziso akaoma: painoshandisa kupisa kumeso, inogona kunyorovesa pamusoro peziso nekusimudzira kutenderera kweropa, saka zvinobatsira kupora kwemeibomian gland basa uye kunogona kudzivirira maziso akaomeswa anokonzerwa nemeibomian gland dysfunction. Kusagadzikana senge kurwadziwa kwekushungurudza. Kune maziso akaoma, kazhinji anoshandisa kupisa kumeso, izvo zvinogona kunyatsogadzirisa kusagadzikana.
Pashure: SDK yekurapa eyelid yekuchenesa inopukuta zvishongedzo
Zvadaro: Strabismus uye amblyopia yekuongorora yekudzidzira chishandiso TSJ-1